China Tungsten Carbide Nozzles Kugadzira uye Fekitori | N & D Carbidhi
Iyo tungsten carbide nozzles ichashandiswa zvakanyanya kuPDC yekuboora matinji uye coni roller mabhureki ekutsvaira, kutonhodza uye kuzora mafuta matipi ekuchenesa uye kuchenesa matombo echitsime muzasi mutsime nekuchera mvura mune anoshanda mamiriro ekumanikidza kwakanyanya, vibration, jecha uye slurry inokanganisa. panguva yemafuta uye gasi rekutsvaga.
Tungsten carbide sandblasting mokugezera anogadzirwa kubva inopisa vachisundira pamwe ngaatarire bore uye venturi mhando mhando. Nekuda kwekuoma kwayo, yakaderera density uye yakanakisa kupfeka uye anti-ngura, Tungsten carbide sandblasting kamwene rave kushandiswa zvakanyanya mu sandblasting uye kupfura peening michina, ichipa hupenyu hwakareba nemweya wakakwana uye kushandiswa kwehasha.
Tungsten carbide pfapfaidzo kamwene yemunda wemafuta ine akasiyana maratidziro, akagadziriswa uye akagadzirwa nemhando yepamusoro mbishi zvinhu. Iine hunhu hwekupisa kwakanyanya kupisa, ngura kuramba, abrasion kuramba, kukwirira kwakaringana uye zvichingodaro.
Tungsten carbide kamwene kemafuta emunda wekuboora zvidimbu zvikamu zvinowanikwa mune aya masitaera uye saizi:
plum rinotumbuka mhando tambo mitsipa
yemukati hexagonal tambo yemhashu
yekunze hexagonal tambo inova
muchinjikwa paburi shinda kamwene
Y mhando (matatu maburi) tambo dzemhashu
giya vhiri chibooreso ikakuruma mokugezera uye wokudhinda fracturing kamwene.
Kune izvo zvakasiyana zvinodiwa nevatengi vedu, isu tiri kuita mukugadzira, kuendesa, kutumira kunze nekutengesa dzakasiyana siyana Tungsten Carbide Nozzles. Izvi zvigadzirwa zvakanyanya kuomarara muhurumende uye zvinopa hupenyu hwakareba hwakareba. Zvese izvi zvigadzirwa zviri nyore kuisa uye zvinoda kushomeka kugadziriswa. Izvi zvigadzirwa zvinowanikwa muhukuru hwakasiyana uye maratidziro.
Izvo zvigadzirwa zvine kusakara kwakanaka uye kusagadzikana kusagadzikana. Iyo tambo inogona kugadzirwa neyakaomeswa carbide kana yakashandiswa brazing uye yekumisikidza tekinoroji.
Isu takaburitsa mhando dzakasiyana dzemabhomba, pazasi pemufananidzo kungo tarira kwako
Pashure: Tungsten Carbide Dhisiki yeValve
Zvadaro: Tungsten Carbide Wear Inoisa uye kuomarara yakatarisana nezvinhu